A na-eji ígwè shredder na-arụ ọrụ otu shreddering nke siri ike plastic, pipe, wood, electronic board and so. I nwere ike ijide ya. Dị ka shredder igwe, anyị na-nwetara na patent ụdị china ọchịchị na 2013.
700 okpukpu abụọ-shredder
A na-eji igwe na-agbaji okpukpu abụọ maka ịkpụcha rọba dị nro, akpa ndị a kpara akpa, akwa, ahihia obodo, bọọdụ eletriki na ihe ndị ọzọ. I nwere ike ijide ya. Dị ka shredder igwe, anyị na-nwetara na patent ụdị china ọchịchị na 2013.
800 okpukpu abụọ-shredder
630 okpukpu abụọ-shredder
630 otu-shred shredder
1200 okpukpu abụọ-shredder
Usoro flowof Pellet Manufacturers: Conveyor → raw material compactor (feeder) system Extruding system → Die-head and High Speed ​​Net exchanging system ring mgbanaka pelletizing system / noodle type pelletizing system → dewatering machine → vibrating sieve → Air Blower → Nchekwa hopper
okpukpu abụọ degas otu-ịghasa pelletizing igwe
1. ebu: ibuga eyi Pee film ma ọ bụ flakes n'ime compactor / feeder. 2. Pee film compactor: ndinuak na mpikota onu film, andfeedcompressed film n'ime extruder amanye, ime ka mmepụta ikike elu na mụ.
300kg / h kpara akpa ịpị igwe
Nke a bụ ụdị igwe plastik ọhụrụ, nke pụrụ iche maka imegharị plastik na ịsa ahịrị, ọ nwere ike dochie igwe igwe mmiri, igwe igwe, mgbe ihe nkiri ahụ si na esemokwu esemokwu dị elu. Mgbe ị na-eme granulu, ọ chọghịkwa compactor. Ga-azọpụta ndị ọzọ na-eri igwe na power.and mfe ịchịkwa.
Pee / eyi film ịpị igwe